IXiaomi Mi 8 Lite ngoku iyafumaneka eFrance naseUkraine | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Emva kwempumelelo eye yanayo iMi 8 Lite evela kwiXiaomi, ukwanda kokufumaneka kwayo kuye kwafunwa kakhulu ngabathengi. Ngoku, njengeendaba nje, esi sixhobo sisandula ukwenziwa ngoku siyafumaneka eFrance naseUkraine, Iimarike ezimbini ezibalulekileyo apho inkampani yaseTshayina ibizuza umhlaba, kwaye ngakumbi kule yokugqibela.
Isithethi sehlabathi sikaXiaomi, uDonovan Sung, wayephethe ukuveza kuTwitter ukuba isixhobo ngoku siyafumaneka kula mazwe mabini. Ukwachaze oko IMi 8 Lite izakufumaneka kungekudala kwezinye iimakethi zeXiaomi, apho amanye amazwe aseLatin America, anje ngeMexico, aza kuba kuluhlu.
Ngaphandle kokuwela kudidi oluphakathi, I-Mi 8 Lite inembonakalo yeembonakalo, ezemidlalo ipremiyamu yeglasi yoyilo lwasemva. Isixhobo siyafumaneka kwiTwilight Gold, Deep Space Grey kunye neDream Blue color variants. Bobathathu basebenzisa ithoni yombala wegradient kwaye yenza iMi 8 Lite ifowuni yokuqala yeXiaomi ukusebenzisa ithoni yegradient.
# Mi8Lite, ngoku iyafumaneka eUkraine naseFrance, kwaye iza kungekudala kwezinye iimarike zehlabathi. Yeyiphi eyona nto wonke umntu onwabile ngayo? ❤️
Yilungele ukudibanisa imibala.#Xiaomi pic.twitter.com/cqhV9f8Fp4
-Donovan Sung (@donovansung) Oktobha 29, 2018
Imidlalo yesiphelo inotshi phezulu kwesikrini sayo Egcina ikhamera ye-24 MP enesakhono se-AI kwiiselfie nakwiifowuni zevidiyo. Ikwabonisa isikrini esikhulu se-6.26-intshi ye-FullHD + esine-19: 9 factor ratio eqinisekisa ukuba ilingana kakuhle kwiintendelezo zabantu kwaye ayikhangeleki inkulu kakhulu.
Ngasemva, kukho isinxibelelanisi sekhamera esime nkqo ngokuthe nkqo kwikona ephezulu ngasekhohlo. Ukuseta ikhamera ezimbini kubandakanya i-12 MP ye-sensor yokuqala kunye ne-5 MP yesibini sensor ene-LED ecaleni. Isixhobo kwakhona ibandakanya inzwa yeminwe ikhwele ngasemva.
Entliziyweni yakhe kukho I-chipset yeQualcomm Snapdragon 660 chipset. Isixhobo siza kwi-4GB + 64GB, 6GB + 64GB, kunye ne-6GB + 128GB iinguqulelo zememori. Kwangelo xesha, iqhuba i-Android Oreo esekwe kwi-MIUI 10 kwaye inebhetri ye-3.350 mAh.
UXiaomi akazange abhengeze ixabiso lesixhobo seUkraine okanye iFrance. Nangona kunjalo, amaxabiso e-China aqala kwi-1.399 yuan (~ 200 euros) yenguqulo yenkumbulo ene-4 GB ye-RAM + 64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Umahluko we-6GB + 64GB uxabisa nge-1.699 yuan (~ € 214) kunye ne-6GB + 128GB yemodeli yokugcina ixabiso kwi-1.999 yuan (~ € 252). Imakethi yehlabathi iya kuyifumana ngamaxabiso aphezulu kancinci. Abathengisi abakwi-Intanethi abanjengoGearBest kwaye abanye sele begcina isixhobo ngamaxabiso aphezulu kancinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Mi 8 Lite iqala uhambo lwayo lwehlabathi: ngoku iyafumaneka eFrance naseUkraine